Maalinta: Sebtember 10, 2017
Gaadiidka tayada dabiiciga ah ee degaanka ee Kocaeli
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, iyada oo ka shaqaysa duulimaadyada dadweynaha, iyada oo ay kordhineyso tayada safarka magaalooyinka, ayaa sidoo kale ahmiyad siisa ilaalinta deegaanka. Maanta, safka ugu horeeya ee sababaha wasakhowga deegaanka waa gaasas waxyeello leh oo laga soo saaray gaadiid ilaa dabiiciga ah. [More ...]
Torun oo ka socda CHP: Dawladda AKP waxay rabtaa inay IZBAN ku daabacdo gurigeeda oo ay la socoto ciyaaraha cagta
Guddoomiye ku xigeenka CHP Seyit Torun, "doorashooyinka maxalliga ah ee Izmir, waxay fahmeen in guuldaradu aysan wali dheef tiri karin awoodda AKP, oo ay soo saartay Dawladda Hoose ee Magaaladu waxay doonaysaa inay daabacdo ciyaaraha gurigooda ee IzBAN'ı cagta," ayuu yidhi. CHP [More ...]
Wasiirka Eroglu, Afyonkarahisar'a tareenka xawaaraha sare leh markaad ka timaado Istanbul ama Ankara inaad cuntaan rootika kareemka ah, waad laaban doontaa haddii loo baahdo… Wasiirka Duurjoogta iyo Biyaha Veysel Eroglu Afyonkarahisar Dhiirrigelinta iyo Maalmaha Dalxiiska ayaa ka soo qeybgalay. barnaamijka [More ...]
Tareenka rakaabka ayaa ku burburtay Erzurum, 1 wuu dhintay
Degmada Pasinler ee Erzurum, 1 waxaa loo dilay natiijo ka dhalatay tareenka rakaabka ah oo ku dhuftay gaariga heerka isgoyska. Marka loo eego macluumaadka la helay, degmada Pasinler ee Erzurum Korucuk xaafada, darawalka lama aqoonsan karo heerka gawaarida taarikada ee 25 EN 459 [More ...]
Maanta taariikhda: 10 September 1870 Haydarpaşa-Isku-horimaad N
Maanta Taariikhda 10 September 1870 Dhoofinta hore ee tareenka Haydarpasa-Izmit ayaa bilowday.